मझेरी भलाकुसारी, अंक १६ (सदानन्द अभागी) | मझेरी डट कम
editor — Sat, 09/13/2014 - 00:25
सदानन्दजी तपाईंलाई मझेरी भलाकुसारीमा स्वागत छ ।
धन्यवाद, मझेरी परिवारलाई ।
सुरुमा आफ्नो व्यक्तिगत र साहित्यिक परिचय दिनुहोस् न ।
मेरो प्रचलित नाम सदानन्द जैसी, थर रिजाल, साहित्यिक उपनाम सदानन्द अभागी, माता स्व. नन्दकली रिजाल र पिता स्व. कलाधर रिजालको जेठो छोरा । खास जन्म मिति बिसं २००३ साल श्रावण १ गते तर नागरिकता र शैक्षिक प्रमाण पत्र अनुसार १५ मार्च १९४७ (वि. सं. १ चैत २००३) । जन्मस्थान पर्वत, शंकर पोखरी गाविस बार्ड नं. १ नुवार ठूलाघर हो । तापनि हाल म जिल्ला नवलपरासी, कावासोती नगर पालिका वार्ड नं ७ शान्तिचोकमा स्थायी रूपमा बसोवास गर्दै आएको छु ।
मेरो शैक्षिक योग्यता बि. एस्सी (एजी) र स्वदेश तथा विदेशबाट गरी १४ओटा कृषि विषयमा तालिम प्राप्त गरेको छु । पेशागत रूपमा म पूर्व बरिष्ठ माटोविज्ञ हुँ । जागिरको सिलसिलामा इजिप्ट, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, जापान र भारतको साथै देशभित्रका ६० जिल्ला जतिको भ्रमण पनि गरेको छु । म पेशाले पूर्व माटो विशेषज्ञ हुँ ।
मेरो साहित्यतिर सम्लग्नता, २०२०/२१ सालबाट थालनी गरेको र मेरो साहित्यिक यात्रा कविताबाट भएको हो । मेरो प्रथम कविता 'आमा' शीर्षकमा लेखिएको र बनारसबाट प्रकाशित हुने आमा पत्रिकाबाट प्रकाशन भएको थियो । तर हाल यो कविता पनि मसँग छैन र प्रकाशन अंक र वर्ष पनि थाहा छैन । पत्र पत्रिकामा कविता लेख प्रकाशन हुन थाले पनि कृति प्रकाश भने २०५७ सालबाट थालनी भएको हो । हाल आएर पूर्णरूपमा साहित्यमा समिर्पित भएर लागेको छु ।
अनि आफूलाई अभागी किन बनाउनु भयो ?
मजाकमा त मैले यसको भाग नपाएर अभागी भएको भन्ने गरेको छु । तर मानव जीवनका आवश्यक्ता र चाहना अनगिन्ती हुन्छन् । मेरो पनि अध्ययनमा इन्जिनियरिङ पढेर इन्जिनियर बन्ने चाहना थियो । एउटा आसाम तेल कम्पनीमा काम गर्ने ज्यामिको छोरा भएको र त्यतिवेला नेपालका ग्रामिण जीवनमा पढिकन कुन काम हलो जोते दूध माम भन्ने धारणाको साथै बाबाको र घरको आर्थिकस्तर कमजोर भएको कारणले गर्दा मेरो अध्ययनमा रोक लाग्यो र म कस्तो अभागी रहेछु भनेर 'अभागी' लेख्न थालेको हुँ। र, साहित्यिक लेखनमा 'अभागी' नै प्रचलित गराएँ । मेरो सदानन्द जैसी नाम, कृषि क्षेत्रमा (खास गरेर माटो सम्बन्धी लेखहरू लेखिरहने भएको)ले प्रचलित नाम हो ।
खास मिति त भन्न सक्दिन तर मेरो साहित्यतिर सम्लग्नता, २०२०/२१ सालबाट थालनी गरेको भएको हो । मेरा फाटफुट लेख रचना पत्रपत्रिकामा निक्लने गरे तापनि कृति प्रकाशन भने २०५७ सालमा ‘आफ्नै व्यथा’कवितासङ्ग्रहबाट थालनी भयो । जहाँसम्म साहित्यतिरको प्रवेशको कुरा भारतको पूर्वी प्रान्त आसामको डिगबोई भन्ने ठाउँमा विद्यार्थी मिलन संघ नामक एउटा संस्था थियो । त्यस संस्थामा हामी विद्यार्थीहरूले आदिकवि भानुभक्तको जन्मजयन्ती मनाउने तथा साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दथ्यौं, त्यहीं हामीले केही न केही लेख्न तथा बोल्न पर्दथ्यो तथा सहभागी हुँदाहुँदै साहित्यतिर प्रवेश गरियो ।
मझेरीमा तपाईंका विशेषगरी गजल, मुक्तक र पुस्तकसमी्क्षा पढ्न पाइन्छ आफूलाई कस्तो लेखकको रूपमा चिनाउनुहुन्छ ?
हालसम्मको लेखाइमा मैले नाटक बाहेकका सबै विधामा कलम चलाएको छु । सबै विधामा स्थापित हुन चाहन्छु ।
यिनै विधा रोज्नुमा के कारण छन् ?
लेख्न त मैले सबै विधामा लेख्ने गरेको छु । तर हाल मझेरीमा गजल, मुक्तक र पुस्तक समी्क्षा प्रकाशनमा आएको हुँदा यिनै विधा रोजेको जस्तो देखिएको मात्र हो ।
के को निम्ति लेख्नुहुन्छ ? लेखेर के पाउनुहुन्छ ?
अहिलेसम्म पुस्तकहरू निकाल्नुभएको छ ? वा निकाल्ने योजना छ ?
मेरा नेपाली साहित्यतिरका कृतिहरू प्रकाशन यस प्रकार छन्–
१) आफ्नै व्यथा (कवितासंग्रह) २०५७ जेष्ठ २५
२) बुढो जवानी (कवितासंग्रह) २०५८ जेष्ठ ३०
३) पश्चतापको आँसु (कथासंग्रह) २०५८ मंसीर ५
४) जीवन लीला (खण्डकाव्य) २०५८ मंसीर
५) कोपिला (लघुकाव्य) २०५९ जेष्ठ
६) तीन युग एक कथा (महाकाव्य) २०६० जेष्ठ १६
७) जीवन लीला (उपन्यास) २०६०
८) काठमाण्डौ देहरादुन (यात्रा विवरण) २०६०
९) म र मेराहरू (जीवनी) २०६० फाल्गुन १३
१०) अग्नि ज्वाला (महाकाव्य) २०६१ बैशाख २
११) नियति (उपन्यास) २०६१ अषाढ
१२) तन्नेरी हजूरबा (उपन्यास) २०६१ मंसीर
१३) माटो र बिरुवाले भोक लाग्यो भन्छन् (कृषि काव्य) २०६१ फाल्गुन
१४) मोहनीको मीठो म्वाइँ (कवितासङ्ग्रह) २०६२
१५) परिवर्तन कथासङ्ग्र्रह २०६३
१६) भुटानी शरणार्थीको कथा-व्यथा २०६३
१७) समभोग समाधि (गजलसङ्ग्रह) २०६४
१८) गजल गुटिका (गजलसङ्ग्रह) २०६५
१९) बुढौतीका रहरहरू (गजलसङ्ग्रह) २०६५
२०) अभागकिा गजलहरू (गजलसङ्ग्रह) २०६६
२१) अभागीका मुक्तकहरू (मुक्तकसङ्ग्रह) २०६८
२२) यात्री (उपन्यास) २०६८
२३) गजल परिकार ((गजलसङ्ग्रह)
२४) सृष्टिमा अभागीको दृष्टि (समालोचना) २०६८
२५) बालुवाको घर (कथासङ्ग्रह) २०६९
२६) अभागीको प्रेमविहारको षष्ठामृत गजलसङ्ग्रह २०७०
मैले जागिरको सिलसिलामा कृषक तथा प्रविधिकहरूको लागि आवश्यक पर्ने कृतिहरू पनि एकल तथा संयुक्तरूपमा लेखेको छु । यी कृतिहरूको प्रकाशन, कृषि संचार महाशाखा तथा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट, भएर वितरण गरिएका थिए । वैज्ञानिक कृतिहरू नेपालीमा लेखिएका कृतिको नाम प्रकाशन वर्ष यसप्रकार छ ।
१) सुन्तला जात खेती ०५/०४२ / ४३
२) विभिन्न बालीमा मलको आवश्यक्ता र प्रयोग विधि २०४३
३) माटो व्यवस्थापन तथा सूक्ष्मतत्व समस्या अध्ययन तथा बिरुवाको खाद्यतत्वको संक्षिप्त विवरण २०५२/५३
४) उर्वराशक्ति बढाउन प्रयोग मलको एक झलक २०५४
५) बिरुवाको एकिकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन पद्धती एक झलक २०५४
६) माटोको उर्वराशक्ति व्यवस्थापन कार्य पुस्तिका २०५५
७) प्राङ्गाारिक मल र शुक्ष्म तत्वको अध्ययन प्रतिबेदन २०५६
८) एकिकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन कार्य पुस्तिका २०५८
९) माटो सुधारको रूपमा कृषिचूनको प्रयोग २०५८/५९
१०) माटो शिविर किन र कसरी २०५८/५९
११) दिगो कृषि विकासको लागि प्रांगारिक खेती २०५८/५९
१२) गोठेमल तथा कम्पोष्ट मल व्यवस्थापन तालीम पुस्तिका २००१ ई स
१३) धानमा एजोला मलको प्रयोग
१४) बिभिन्न बालीमा खाद्यतत्व तथा माटो व्यवस्थापन २०६०/६१
१५) दिगो माटो व्यवस्थापन विविध पक्षहरू २०६१
१६) प्राङ्गारिक खेती एक परिचय २०६२
१७) क्षतिग्रस्त कृषिभूमिको व्यवस्थापन २०७०
अनुवाद कृतिहरू (जापानीबाट नेपालीमा)
१) तरकारी बालीमा खाद्यतत्व कमी तथा बढीका लक्षणहरू भाग १ २०६०
२) तरकारी बालीमा खाद्यतत्व कमी तथा बढीका लक्षणहरू भाग २ २०६०
Study or Research Papers
1. Impact on Soil Analysis Recommendation to farmers by Soil Analysis Laboratory
WARTC, Khairenitar Tanahun, 1991
2. Study report on Soil Fertility Report of Kavre district and manure and fertilizer
Use in Palpa. 2058
3. Study report on Organic manure production and utilization of FYM/ Compost by
the farmers in the Baitadi District of Nepal 2059
4. Study on Use of Compost at farmers level 1997
5. Study report on organic manure and micro nutrients 1999
6. Report on soil Fertility Survey and maping of Parbat district 2000.
7. Review and Planning of sustainable soil management programs Summary report 2001
8. Production and utilization FYM/ compost by the farmers in the Kavre District of Nepal 2002
9. Report on soil fertility mapping in Shyanja 2002
10. Report on soil fertility mapping in Mahottari 2002
11. Review and Planning of sustainable soil management programs Summary report 2002
12. Report on soil fertility mapping in Nawalparasi 2003
13. Review and Planning of sustainable soil management programs Summary report 2003
14. Proceeding of Workshop on Soil management Activities and Implementation in Farmer's Field 2004
15. Soil Fertility Survey and Mapping in Parsa 2061
16. Review and Planning of sustainable soil management programs Summary report 2004
17. Review and Planning of sustainable soil management programs Summary report 2005
साहित्य लेखनमा प्रेरणाका स्रेात आदरणीय कविवर तथा मेरा स्कुलगुरु हरिभक्त कटुवाल नै हुनुहुन्छ । नेपालका साहित्यकारमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, हिन्दीका साहित्यकारमा सन्त कविरदास, अंग्रेजी साहित्यकारमा शेसपियरको नाम अग्रपंक्तिमा लिए पनि सबै स्रष्टाहरू आदरणीय हुनुहुन्छ ।
तपाईंका रचनाहरूमा देशप्रेम, माया, शृंगार, समीक्षा आदि विषय झल्किन्छन् आँफूलाई चाहिं कस्तो विषयमा लेख्न मन हुन्छ ?
यसमा वातावरणले निर्भर गर्ने कुरा हो तर मलाई शृंगार रसमा लेख्न मन पर्छ ।
आफ्नो लेखनबाट कत्तिको संतुष्ट हुनुहुन्छ ?
पूर्ण संतुष्ट छु ।
फुर्सदमा के–कस्ता कुराहरू गरेर बिताउनुहुन्छ ?
विद्यार्थी जीवनमा पढाइ र घरको काममा समय दिइयो । जागिर सुरु गरेपछि जागिरे काम पूर्ण बफादारसँग गरियो । जागिरमा लाग्ने समय बाहेको बाँकी समय वि.सं २०५० सालसम्म उपलब्धीहीनमा बिते । २०५१ यता २०६१सम्म जागिरमा सकृयताका साथ बफादाररूपमा काम गरियो र माटो विज्ञानसम्बन्धी लेख र साहित्य लेखनमा लगाइयो । २०६१ यता पनि माटोको विशेषज्ञ भएर माटो सम्बन्धी काम, सामाजिक काम र साहित्यिक लेखनमा पूर्णरूपमा लागेर समय बिताएको छु ।
चितवन र नवलपरासीका कार्यक्रममा पनि सक्रियहुँनुहुँदो रहेछ, विशेषगरी कस्ता कार्यक्रम गर्नुहुन्छ ?
लक्ष्मीस्मृनित साहित्य समाजको संस्थापक अध्यक्ष सहित हालको समेत अध्यक्ष छु । वर्षमा एक पटक लक्ष्मीजयन्ती मनाउने कार्यक्रम गर्दै आएको छु । यस कार्यक्रममा कविता वाचन, स्रष्टासम्मान कृति विमोचनजस्ता कर्यक्रम गरिन्छ । नवलपरासीको (खास गरेर नेपालको मध्यविन्दुमा अवस्थित कावासोती क्षेत्रको) साहित्यिक गतिविधिलाई सकृय पार्नको लागि महिनामा अनिवार्य एउटा साहित्यिक कार्यक्रम “साधना–संगम” नामक संस्था मार्फत साहित्यिक जमघट हुन्छ । यसमा पनि कविता वाचनको साथै साहित्यिक क्षेत्रमा गरिने कार्यक्रम आवश्यक्ता अनुसार गरिन्छ । म यसको सदस्यको रूपमा काम गर्छु । अर्को प्रगतिनगर नवलपरासीमा पनि नारी साहित्य समाज नामक संस्था छ । त्यसमा सल्लाहकारको रूपमा सहभागी हुन्छु । आजीवन सदस्य हाम्रो मझेरी साहित्य प्रतिष्ठान, आजीवन सदस्य माधुरी साहित्य प्रतिष्ठान, आजीवन सदस्य जनमत मासिक बनेपा, काभ्रे, आजीवन सदस्य पर्वत साहित्य सङ्गम, आजीवन सदस्य नारीसाहित्य समाज, प्रगतीनगर, नवलपरासी, आजीवन सदस्य स्याङ्जा साहित्य प्रतिष्ठान, स्याङ्जा लगायत पल्लव साहित्य प्रतिष्ठान चितवन, प्रेमा वाङ्मय प्रतिष्ठान चिसापानी नवलपरासी, लुम्बिनी वाङ्मय प्रतिष्ठान आदिका कार्यक्रममा पनि आमन्त्रितको रूपमा सह भागी भएको हुन्छु । जहाँ सहभागी भए पनि साहित्यिक कार्यक्रम मिल्दाजुल्दा नै हुन्छन् ।
नियमित भेटघाट भलाकुसारी गर्न स्रष्ठाहरू र कस्ता कुरहरू हुन्छन् हामीलाई पनि बताई दिनुहुन्छ कि ?
कार्यक्रमको समयबाहेक म गाउँमा बस्ने भएकोले त्यति स्रष्टासँग भेटघाट हुँदैन । भेटघाटको समयमा कार्यक्रममा व्यस्त भइन्छ । साधारण साहित्यिक कुराहरू मात्र हुन्छन् ।
नेपाली साहित्य सकरात्मक दिशातर्फ गइरहेका छ जस्तो लाग्छ ?
अवश्य नै सकरात्मक दिशातर्फ गइरहेका छ ।
अहिलेसम्म साहित्यिक सम्मान तथा पुरस्कार पाउनु भएको छ ?
साहित्यिक लेखनमात्र नभएर जागिरमा राम्रो काम गरे वापत पनि पुरस्कार प्राप्त गरेको छु । जो यसप्रकार छन्
-देवचुली टेलीभिजनबाट आदिकवि भानुभक्तको द्विशतवार्षिकीको अवसरमा प्राप्त सम्मान पत्र २०७१
-आदिकवि भानुभक्त आचार्य द्विशतवार्षिकी लुम्बिनी अञ्चल समारोह समिति २०७०/०७१बाट कदरपत्र, २०७१ जेष्ठ २४ गते
-हाम्रो मझेरी साहित्य प्रतिष्ठान, भरतपुर चितवन, सम्मान पत्र, फाल्गुन १७, २०७०
-स्याङ्जा साहित्य प्रतिष्ठान, स्याङ्जा सम्मान पत्र २०७०/६/१२
-प्रेमा वाङ्मय प्रतिष्ठान, चिसापानी नवलपरासी, सम्मान पत्र २०७०
-त्रिमूर्ति एबार्ड ताम्रपत्र सहित रु १०,०००/– नगद त्रिमूर्ति निकेतन काठमाण्डौ २०६९
-जलुके घुमाउरे सिँचाई नहर जलउपभोक्ता समिति प्रगतिनगर ६, २०६८(कृषिलेखनमा अभिनन्दित)
-सामुदायिक श्रोत तथा वातावरणीय विकास केन्द्र्र पर्वत सम्मान पत्र, २०६८
-आदर्श सम्मान, २५५५५/– नगदपुरस्कार गैडाकोट, नवलपरासी २०६७
-नारी साहित्य समाज, प्रगतिगनर, नवलपरासी सम्मान पत्र २०६७
-अंकुरा नेपाल प्रसंसापत्र २७ नभेम्बर १९६७
-पल्लब साहित्य प्रतिष्ठान, चितवन सम्मान पत्र २०६६
-सामाजिक परिवर्तनका लागि सरोकार केन्द्र अमरापुरी, नवलपरासी २०६६ कदरपत्र(समाजिक कार्य वापत)
-हाम्रो मझेरी साहित्य प्रतिष्ठान (कदर पत्र २०६५)
-अपाङ्ग पुनस्थापन समन्य समिति पिठौली नवलपरासीबाट सम्मान पत्र, २०६४ (साहित्य तर्फ)
-दिगो भू–व्यवस्थापन कार्यक्रम, बखुण्डोलहाइटबाट सम्मान पत्र २०६३ (जागिर)
-गोर्खा दक्षिण वाहु चौथा, २०६१, (जागिरको सिलसिलामा)
-Best Prize on social service,1968 विद्यार्थी मिलनसंघ डिगवोई, आसाम १९६८
-Third prize on Nepali Recitation,1967, डिगबोई कलेज, आसाम, १९६७
इन्टरनेट तथा मझेरीजस्ता साहित्यिक पृष्ठहरूले आवतले तपाईंको लेखलाई के कस्तो परिवर्तन गरेको छ ? हामीसँग अनुभव बाँड्नुहुन्छ कि ?
इन्टरनेटको प्रयोग त राम्रोसँग गर्न सकेको छैन । तर मझेरीसँगको सम्पर्कबाट मेरो लेखनकार्य तीब्र भएको छ । र मनले चाहेजति लामा लामा लेखहरू पनि लेख्न थालेको छु । अनि म ढुक्क पनि यसकारणले छु कि मझेरीले मेरा लेखरचनालाई तत्काल प्रकाशन गरिदिएको हुन्छ । अर्को राम्रो पक्ष के भने प्रकाशन गरेका लेख रचना कतिले पढे भन्ने पनि र प्रतिक्रिया कसैले लेखे पनि पढ्न सकिने ।
फेसबुक र टुइटरजस्ता सामाजिक सञ्जालहरूलाई कसरी उपयोग गरिरहनु भएको छ ?
फेसबुक कहिलेकाहीं प्रयोग गर्छु ।
भविष्यमा केही साहित्यिक योजना भए बताइदिनुस् ?
लेखनलाई निरन्तरता दिने र आर्थिकले भ्याएमा कृति प्रकाशन गर्ने, अरु खास योजना छैन ।
अहिले नेपाली साहित्य जगतलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले नेपाली साहित्य जगत सकरात्मक दिशातिर लम्किरहेको छ जस्तो लाग्छ । कृति प्रकाशनहरू भइरहेका छन् । खास गजल लेखनमा त व्यापकता नै छ । विदेशमा पनि साहित्यिक लेखन र कृति प्रकाशनहरू भइराखेका छन् । फेसबुक मार्फत पनि साहित्यले व्यापकता पाएको छ । मझेरी, समकालीन साहित्य, साहित्य संसार, पल्लव आदिजस्ता साइट मार्फत पनि साहित्यले राम्रो गति लिएको देखिन्छ । छन्द तथा बहरको प्रयोगले पनि गति बढाएको छ आदिलाई नियाल्दा नेपाली साहित्यले गति लिएको छ र अँझै यसको व्यपकताको आवश्यक्ता छ ।
तपाईं गत करिब तीन वर्षदेअि नियमित मझेरीमा लेख्दै आउनु भएको छ र करिब १७० रचना यहाँ प्रकाशित गरिसक्नुभएको छ । यसरी नियमित लेखिरहनु र मझेरीलाई नै रोज्नुको पछाडि के कारण छ ?
लेख्न त मैले २०२०/२१ सालबाट थालनी गरेको हुँ । केही लेख तथा कृतिहरू मेरा नष्ट पनि भए । कविता लेखन २०२६ सालसम्म फाटफुट ‘कलियुग’ पत्रिकामा प्रकाशन पनि भएका थिए तर सरकारी जागिर खाए पछि बीचमा साहित्य लेखन रोकियो। २०४० सालमा म माटो विज्ञको रूपमा खैरेनीटारको तालिम केन्द्रमा हाजिर भएपछि मैले कृषिमा खासगरी माटो्को विषयमा लेखहरू लेख्न थालें । मेरा कृषि सम्बन्धी लेखहरू राष्ट्र वैंकबाट प्रकाशन हुने प्राथमिक क्षेत्र समाचार र कृषि संचार महाशाखाबाट निस्कने कृषि पत्रिकामा तथा बुकलेटको रूपमा प्रकाशन हुन थाले । म नलेखी बस्न सक्दिन, केही न केही लेख्नै पर्छ त्यसोहुँदा लेखनमा नियमितता त हुने नै भयो । मझेरीलाई रोज्नुको कारण त तपाईंका सिर्जना मझेरीमा पठाउनु होस् भनेर कुनै साथीले भन्नुभयो (नाम भुले)। मझेरीमा लेख पठाएँ । यसलाई कुमारजीले प्राथमिकताको रूपमा प्रकाशन गर्दै धन्यवाद दिन थाल्नुभयो । अब त मझेरीको लागि लेख लेख्न भ्याइन भने निदै लाग्दैन ।
धन्यवाद छ, त्यसको लागि । प्रतिकृयाहरू त खासै दिनहुँदैन । किन अरूका लेखकहरूको रचना पढ्नुहुन्न ?
नेट सुविधाको कमी, नेट सञ्चालनमा प्रविधिक ज्ञानको कमी आदिले गर्दा लेख रचना सर्सर्ती हेरे पनि, गहिरिएर अध्ययन गर्न सक्दिन ।
समकालीन साहित्यमा पनि रचना पठाउँछु तर बढी मझेरीमा पठाउँछु ।
मझेरी र अन्य साइटमा देखा पर्ने लेखकहरूको नाम लिनुपर्दा कसलाई सम्झनुहुन्छ ?
समकालीन साहित्यमा राजेन्द्र पहाडीलाई सम्झन्छु ।
संसारभरि छरिएर रहनु भएका लेखक तथा पाठकलाई के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ?
ज्ञानले भरिएको यस साइटलाई आफ्नो आँखाको नानी बनाऔ, लेखन कार्यलाई निरन्तरता दिंदै जाऊँ, प्रतिकृया दिंदै जाऊँ र यसबाट प्राप्त सुसन्देशलाई सबैमा फैलाऊँ ।
अन्त्यमा केही छ भने बताउनुहोस् ?
अन्त्यमा कुमारजी र मझेरीका सबै सदस्यहरू जसले यत्रो महान कार्यलाई सञ्चालन गरेर नेपाली साहित्यलाई उच्चाइमा पुर्याउनु भएको छ । लेखकहरूका लेखरचना प्रकाशनमा ल्याएर संसारभरि आफ्ना धारणा राख्ने मौका प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई श्रद्धासुमनसहित हार्दिक धन्यवादको साथै लेखक तथा पाठक बर्ग, सबैमा हार्दिक सम्झना एवम नमस्कार ।
सदानन्द अभागीका रचनाहरू : यता
सदानन्द अभागीका रचनाहरू (संक्षिप्त अंशसहित) यता
सदानन्द अभागीको फेसबुक पेज : यता
‹ मझेरी भलाकुसारी, अंक १८ (होम सुवेदी) मझेरी भलाकुसारी, अंक ०३ (आचार्य प्रभा) ›
धन्यवाद सञ्चालक ज्यु तथा
एकदेव — Sat, 09/13/2014 - 21:24
धन्यवाद सञ्चालक ज्यु तथा अभागी जी लाइ शुभ-कामना। तपाइँ भाग्यमानी नै हुनुहुन्छ।
उहाँकाे साेच र विचार पढ्दा
HomSuvedi — Mon, 09/15/2014 - 06:55
उहाँकाे साेच र विचार पढ्दा उहाँ अभागी नभइ नेपाली भाषा र साहित्यलाइ नै भाग्यमानी बनाउने व्यक्तित्वका धनी हुनुहुन्छ । म यस्तो ठान्छु ।
धेरै पछिको मझेरीको सुभाष
nandalal.acharya — Fri, 09/19/2014 - 23:25
मझेरीको भलाकुसारीले ऊर्जा दिन्छ । साहित्यमा जुटिरहने प्रेरणा मिल्छ । अभागीज्यूको साहित्यसेवाको इतिवृति थाहा पाउँदा उहाँप्रति श्रद्धाले शिर झुक्यो । आफूले त केही पनि गर्न सकेको रहेनछु भन्ने लाग्यो । र, अब अरु क्रियाशील हुनु जरुरी रहेको आफैंलाई बोध भयो ।
अभागीज्यूको सफल साहित्यिक यात्रालाई हार्दिक साधुवाद ।।।
editor — Sun, 09/21/2014 - 04:33
सदानन्दजीलाई गत तीन वर्षदेखि नियमित मझेरीमा लेखिरहनुभएकोमा धन्यवाद । र भलाकुसारीमा भाग लिइदिनुभएकोमा धन्यवाद । पाठकहरूलाई वहाँको रचना पढिदिनुभएकोमा धन्यवाद । प्रतिकृया दिनेहरूलाई पनि धन्यवाद । यो भलाकुसारीले सदानन्दजीलाई अरू चिन्ने अवसर मिलेको छ भन्ने आशा छ।
लाखौ तारा फुल्ने आकाश
अनेसास न्यू-योर्क च्याप्टरको लक्ष्मी जयन्ती कार्यक्रम सम्पन्न